I-Villa Amarilla 2 (uhamba imizuzu eyi-2 ukusuka elunxwemeni) - I-Airbnb
I-Villa Amarilla 2 (uhamba imizuzu eyi-2 ukusuka elunxwemeni)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSamuel
Iflethi etofotofo enamagumbi ayi-2, isandul 'ukulungiswa yaza yaxhotyiswa ngokupheleleyo.
Ikwindawo ethe cwaka, kuthatha imizuzu eyi-2 ukusuka elunxwemeni kwaye imizuzu eyi-5 ukuya evenkileni yokuqala. Le flethi ingamkela isibini okanye isibini + umntwana omnye (isicelo esithile sokuba kwenziwe ibhedi eyi +1).
Ukuba ufuna ukuzimela ngokupheleleyo kwaye wonwabele ubomi basekuhlaleni, le flethi ikulungele. Zive ukhululekile ukungcamla iziqhamo zegadi: ii-mangos, ii-coconuts, i-pomegranate.
Uzimele ngokupheleleyo ngale flethi inento yonke. Ioveni, into yokupheka igesi, umatshini wokuhlamba impahla, ifriji, ioveni yeMicrowave, iketile, unayo yonke into oyifunayo ukuze uzive usekhaya. Le flethi ine-aircon eyi-1.
I-Albion ikwimizuzu eyi-20 ukusuka kwisixeko esikhulu sasePort Louis. I-Albion yaziwa ngokuzola nangokhenketho olungathethekiyo njengeendawo ezifana neFlic en Flac okanye iGrand Bay. Uza kukwazi ukonwabela ulwandle nabantu abambalwa. I-Albion ikufutshane kakhulu kuzo zonke izixeko ezinkulu, kwaye ilungelelaniswe kakuhle njengendawo yokuhamba yokutyelela esi siqithi.
Le ndlu ime kwenye yeendlela eziphambili zase-Albion, kodwa kungekhona ngqo endleleni, nto leyo eyenza kuthi cwaka kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Samuel
Ukuhlala kwindawo esecaleni siyafumaneka ukuba kuyimfuneko. Sithumelele nje umyalezo kwibhokisi yomyalezo yakwa-airbnb, kwaye siza kuza kukubona.